Guddiga ku howlan xallinta dagaal-beeleedka ka dhacay Beledweyne oo go’aanno soo saaray – Radio Muqdisho
Guddiga ku howlan xallinta dagaal-beeleedka ka dhacay Beledweyne oo go’aanno soo saaray
Guddigii ku howlanaa xallinta dagaal beeleed ka dhacay degmada Beledweyne ayaa soo saaray qodobbo horu-dhac ah oo suurta galin doona in labada beel ay heshiiyaan.
Go’aanno ka kooban afar qodob ayay soo saareen odayaasha ku howlan arrintaan, ayadoo dhinacyada dagaallada ugu baaqay inay kala qaadaan maleeshiyadka.
Sidoo kale guddiga ayaa labada beel ka codsaday in la isu celiyo hantidii la kala qabsaday intii uu dagaalku ka socday magaalada iyo in si deg deg ah loo bilaabo wada-hadallo u dhaxeeya labada beelood.
Ugu dambeyn guddiga ku howllan nabadeynta ayaa ugu baaqay beelaha dagaallamay in ay shacabka barakacay u ogolaadaan inay si nabad ah ugu soo laabtaan xaafadahooda.
Guddiga ayaa booqan doona goobihii ay dagaalladu ka dhaceen ee xaafadda Howl-wadaag ee degmada Beledweyne.
Safiirka Soomaaliya ee Turkiga oo ka qeyb galay kulan ardayda Soomaaliyeed ku yeesheen Ankara
Ciidamada ammaanka oo howl-gallo ka wada degmooyinka Muqdisho qaarkood